Vaovao - Arenti manendry an'i Eleczar ho mpaninjara eo an-toerana ao Maroc
Arenti dia manendry an'i Eleczar ho mpaninjara eo an-toerana ao Maroc
Hangzhou - 24 Desambra 2021 - Arenti, mpamatsy fakantsary fakana sary an-tsaina indrindra momba ny fiarovana an-trano IoT, dia nanambara androany fa hanangana ny fisiany any Maraoka miaraka amin'i Eleczar ho mpizara ho an'ny sokajy vokatra andian-dahatsoratra rehetra.
Ny fiaraha-miasa vaovao dia manitatra ny fampandrosoana ny orinasa Arenti any amin'ny fantsom-pivarotana mpanjifany any Maroc sy Afrika Avaratra.
Eleczar no mpizara an-tsokosoko ny vokatra an-trano an-tsokosoko, toy ny jiro maranitra, fanairana. Adnane Zeroual, Tompon'ny Eleczar, dia nilaza hoe: "Rehefa nahita ny famolavolana fakan-tsary fakan-tsarimihetsika Arenti tao amin'ny Facebook izahay dia nifandray tamin'i Arenti avy hatrany mba hahazo fiaraha-miasa ary tena afa-po tamin'ny fampisehoana sy ny kalitao izahay taorian'ny fizahan-toetra ireo vokatra, ka nanapa-kevitra ny hizara Arenti izahay fakantsary tamin'ny volana desambra ary nametraka ny kaomandy voalohany izay tonga tsy ho ela izahay. Voatendry ho mpizara mivantana sy mpanafatra fakantsary fakantsary manontolo an'i Arenti izahay nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2021. Tena reharehanay ny fiaraha-miasa ary matoky tanteraka ny vahaolana azonay omena miaraka amin'i Arenti. ”
Ny fiaraha-miasa mivantana amin'i Eleczar dia hampiharina manomboka amin'ny 1 Janoary 2021.
Momba an'i Arenti
Arenti dia mikendry ny hanolotra ny mpampiasa manerantany mora kokoa, azo antoka, ary vokatra azo antoka amin'ny fiarovana an-trano miaraka amin'ny fitambarana tonga lafatra amin'ny famolavolana farany, ny vidiny mirary, ny haitao mandroso sy ny fiasa ho an'ny mpampiasa.
Arenti Technology dia vondrona AIoT mitarika mifantoka amin'ny fitondrana vokatra azo antoka sy mora kokoa ary azo antoka ho an'ny mpampiasa manerantany. Teraka tany Pays-Bas, Arenti dia natsangan'ny andiana manam-pahaizana avy amin'ny sehatra samihafa, anisan'izany ny orinasa fiarovana lehibe indrindra manerantany, ireo orinasa 500 manerantany, ary ny sehatry ny tranony manan-tsaina manerantany. Ny ekipa Arenti core dia manana traikefa 30 taona mahery any AIoT, fiarovana ary indostrian'ny trano manan-tsaina.
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady: www.arenti.com.
Faly i Eleczar manolotra fitaovana sy fitaovana feno ho an'ny fanamboarana, ny fikojakojana ny indostria ary ny filan'ny mpiasa an-trano.
Hatramin'ny nananganana azy, ny ELECZAR dia niasa manokana tamin'ny fanafarana, ny famokarana ary ny fivarotana kojakoja elektrika ary ny fitaovana fanoloana toy ny fanaparitahana faratampony, ny «transformatera», ny «panneaux electrique» sy ny maro hafa, ho an'ny mpandraharaha, ireo mpandefa herinaratra ary olona tsirairay. Tsy maninona izay vahaolana fizarana herinaratra mety aminao, azonao atao ny miantehitra amin'ny ekipanay hahazoana ireo fitaovana ilainao amin'ny sehatry ny toeram-ponenana, ara-barotra sy indostrialy.
Avy amin'ny trano fitobiana misy anay any Meknes dia manolotra vokatra marobe mihoatra ny 12000 avy amin'ny marika ekena toa ny Siemens, Philips, Fermax, Fresco, General Electric ...
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady: https://eleczarstore.com.
Fotoana fandefasana: 22/03/21